Qaar ka mid ah Maayarada gobolada Maraykanka oo digniin adag u diray Donald Trump | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Qaar ka mid ah Maayarada gobolada Maraykanka oo digniin adag u diray Donald Trump
Qaar ka mid ah Maayarada gobolada Maraykanka ayaa madaxweynaha la doortay ee dalkaas Donald Trump waxay u direen digniin adag oo ku saabsan inuu fuliyo qorshihiisa uu dalka kaga saari doono soo galootiga sharci darada ku jooga.
Maayarka magaalada New York oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga, Bill de Blasio, ayaa sheegay inuu Donald Trump ku wargeliyay in bulshooyiinka magaalada ku nool ay ka baqayaan qorshihiisa masaafurinta dadka sharci darada ku jooga, lana dareemayo khal khal badan.
Mr De Blasio ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay uu uga digay inuu tallaabada noocaas ah fuliyo “Waxaan u sheegay inaan sameynayo waxkastoo aan awoodo si aan u difaaco soo galootiga aan sharciga haysan, si qoysaska aanan loo kala geyn”. ayuu yiri Maayarka.
Trump aya wacad ku maray inuu masaafurin doono ama xabsi gelin doono qiyaastii seddax milyan oo qof oo si sharcidaro ku jooga Maraykanka, horeyna dembiyo u geystay.
Sidoo kale maayarada magaalooyiin ay ka mid yihiin Los Angeles iyo Washington ayaa wacad ku maray inay difaaci doonaan muhaajiriinta, waxayna arintani dhabar ku jab weyn ku noqon doonta qorshaha madaxweyne Trump.